Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0412 lar
Manao toy izay nataon'i Paoly (1Tes 1 : 6, 7)
Alarobia 25 Jolay
Vakio ny 1 Tes. 1:6,7. Inona no hafatr’i Paoly eto? Ahoana no tokony ho fahazoantsika izany, araka ny maha-ohatra fara-tampony an’i Kristy ho antsika?
Tsy mampiseho ity manaraka ity ny ankamaroan’ny dikan-teny. Ao amin’ny and. 6 mantsy dia mbola manohy ilay fehezan-teny efa natombony tao amin’ny and. 2 ihany i Paoly ary manitatra izany hatrany amin’ny and. 10. Ny fitanisan’i Paoly ireo antony mahatonga azy ho velom-pisaorana ao anatin’ny fivavahany no ventin-kevitra ao anatin’io fehezan-teny somary lava io. Manampy lafin-javatra anankiroa amin’io fisaorana io ny and. 6 sy 7, izay miainga amin’ny “fa” eo amin’ny fiantombohan’ny and.5. Misaotra i Paoly (and. 2) fa (and. 5) nanahaka azy sy ny mpiara-miasa aminy ny Tesalônianina, hany ka na izy ireo koa aza dia tonga fianarana (and. 6,7).
Matetika isika no mampitandrina ny olona hoe mampidi-doza ny maka tahaka olonkafa ankoatra an’i Kristy. Marina tokoa izany, fa na izay tsara fanahy indrindra amin’ny olona aza dia mety handiso fanantenana antsika ihany indraindray. Raha ny marina dia ilaintsika ny môdely halain-tahaka. Mila mifanome torolalana sy torohevitra ary mila mifanampy avokoa ny olona rehetra manoloana olana manokana sy mandritra ny fotoan-tsarotra. Zovy moa no tsy efa nahita fitahiana avy tamin’ny torohevitra mahasoa na ny ohatra tsara alain-tahaka anankiray?
Ankoatra izany, na tiantsika na tsy tiantsika, dia mbola ho tonga mpitarika ao amin’ny fiangonana isika indray andro any, ka haka tahaka antsika ny olona. Zavadehibe manao ahoana tokoa àry ny hoe iainan’ny Kristianina “ela nihetezana” ny zavatra toriny ary ny hoe asehony eo amin’ny fiainany ny zavatra lazainy. Etsy an-danin’izany, nametraka arofanina anankiroa i Paoly eto. Voalohany, ny fanahafana (and. 6) dia manaraka aorian’ny fandraisana (and. 5). Vaindohandraharahan’ny Tesalônianina ny nandray ny Tenin’Andriamanitra sy ny nampihatra izany mivantana teo amin’ny fiainany tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Azo itokiana mandrakariva ny Tenin’ Andriamanitra. Faharoa, nampitodika azy ireo tany amin’ny Tompo, izay môdely voalohany indrindra, i Paoly (and. 6). Izay nataon’i Jesôsy ary mbola hataony, dia môdely azo antoka lavitra noho izay hataon’i Paoly aza. Tsy diso velively rahateo ny eritreritr’i Paoly momba ny tenany sy ny toetrany (1 Tim. 1:15).
Na dia avy niteny izany aza anefa i Paoly, dia vao mainka nampirisihiny izy ireo teo amin’ny faniriany haka tahaka azy ho toy ny mpampianatra sy mpanolotsaina malala, ary koa ho tonga ohatra mendrika alain-tahaka ihany koa. Eo amin’io toe-javatra manokana io, dia ny fifaliana ao anatin’ny fahoriana no nalain-tahaka. Ny fahoriana dia mety hahatonga ny olona anankiray ho feno fangidiana na ho tsara kokoa. Eo amin’ny tontolon-kevitry ny filazantsara sy ny herin’ny Fanahy Masina no nahitan’ny Tesalônianina ny fifaliana tsy avy tamin’ny herin’olombelona teo anivon’ny fahoriana, tahaka izay efa nandraman’i Paoly sy i Silasy teo aloha (Asa. 16:22-25).
Môdely manao ahoana ianao ao amin’ny fiangonana misy anao? Inona avy ireo zavatra tsara alain’ny hafa tahaka eo amin’ny fiainanao? Inona kosa ireo tsy tsara?